Maqal: Ciidan ka tirsan Soomaaliland oo soo degay Duleedka Degmada Xingalool – SBC
Maqal: Ciidan ka tirsan Soomaaliland oo soo degay Duleedka Degmada Xingalool
Wararka ka imanaya Degmada Xingalool ee gobolka Sanaag ayaa sheegaya in xalay halkaasi ay yimaadeen ciidan ka tirsan kuwa Maamulka la baxay Soomaaliland, fariisinna ka sameysteen meel banaanka ka ah magaalada.
wararku waxay intaasi ku darayaan in shacabka degmada xingalool ay ka soo horjeesteen in ay ciidankaas ku sii sugnaadaan goobta gudahana u soo galaan degmada .
Xildhibaan Cabdixakiin xaaji Maxamed oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamanka Puntland oo ku sugan Xingalool ayaa u xaqiijiyay SBC in ciidankaasi ay yimaadeen Degmada Balse aanay gudaha u soo galin iyagoo goob ka baxsan fariisimo ka sameystay.
Xildhibaanku waxa uu sheegay in saaka ay u tageen ciidankaasi dadka wax garadka degmada una sheegeen in ay dib uga laabtaan deegaanka ayna u sheegeen in aysan ku sii sugnaan doonin goobtaas una gudbi doonaan goobo kale waasida uu hadalka u dhiagye.
Dhageyso wareysi aan la yeelanay Xildhibaan Cabdixakiin xaaji Maxamed.RIIX AMA DAAR
Ciidamada Maamulka la baxay Soomaaliland ayaa mudooyinkii ugu dambeeyay safaro daan daansi ah u imanayay deegaano ka tirsan Puntland siiba kuwa dhaca gobolada Sool iyo Sanaag, iyadoo ay aheyd dhowaan markii ciidan ka tirsan Soomaaliland ay xoog ku qabsadeen Degmada Taleex inkastoo ay dib uga laabteen.
abwaan beele james jubbalander says:
Juun 11, 2014 at 5:43 pm
Waa nasiibdaro wayn Runtii ,,in maalinkasta dhulkii puntland ay somaliland soo gasho intii madaxwaynaha xanuunsani Ee gaas uu dalka haystay ,,,, waynu ognahay maamuladii ka horeyey isaga maysan dhicin in maamulka somaliland iska. Soo galo dhulka puntland ,,lkn hada way dhacday ,,Runtii dowlada gaas ninkii khayr ka sugaya isagaa cirka Roob ku og ,